Topnews:- Qorshaha Damjadiid ee inqilaabka Xukunka Somalia- Warbixin Sirdoon.
20 March 2013 Waagacusub.com-Xulufadda Damu Jadiid ee Madaxweyne Hassan Alasow ayaa qorsheeynaya in Isbedel weyn lagu sameeyo Madaxda Dowladda Saraakiisha iyo Maamul Goboleedyada Dhisan iyo Kuwa aan Dhisnayn oo la filayo in hada layagleelo.
1-Isbedelka koowaad wuxuu bartilmaameedkiisu yahay Ciidanka !
Qorshaha ayaa wejigiisa koowaad la fuliyay kadib marki Taliyihii Ciidanka iyo Abaanduulihii xilka laga qaaday. Waxaa todobaadkaan laga abuuray Muqdisho khalkhal iyo falal lagu wiiqay Nabadgelyada taas oo xulufadda Damu Jadiid uga danleedahay inay ugu qiil sameeyso xilka qaadis ay la damacsan yihiin Taliyeyaasha Boliiska,Nabadsugida,Asluubta,Mariiniska iyo Gudoomiyaha Gobolka Banadir.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed waxaa loo magacaabi doonaa Jeneral Mohamed Nuur Galaal,Agaasimaha Hay''ada Nabadsugida waxaa loo magacaabayaa Abdirahman Guulwade Halka Taliyaha Mariiniska laga dhigayo Korneyl Mohamed Nur (Korneyl Madey) oo degan Dalka Canada.
Jeneral Galaal waxaa magacaabistiisa riixay Madaxweynahii hore ee Somalia Dr Abdikasim Salaad oo ku magacaaban La taliyaha Madaxweynaha Somalia Hassan Garguurte,sidoo kalena magacaabista Abdirahman Guulwade waxay ka timid Wasiirka Madaxtooyadda Farah Topaz oo ay isku reer yihiin .
Qorshaha Damu Jadiid waxaa xilka looga qaadayaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Mohamud Nur Tarzan iyadoo dhamaan xilka qaadista Madaxda sabab looga dhigayo amaan xumida Muqdisho.
Qaraxyada, Dilalka iyo amaan xumada Muqdisho waxaa fuliya Ciidamada dhawaan laga keenay Kampala oo hoostaga Wasiirka Gaashandhiga iyo Madaxweynaha kuwaas oo sedex boqol oo ka mida laga dhigay dharcad (Shibil) balse hubeeysan .
2- Qorshaha Labaad ee Dam Jadiid wuxuu yahay:- in maamul Goboleed loo sameeyo Koonfurta Gaalkacyo ilaa Balcad taasoo ah sedex gobol iyo bar Magaalo madaxna looga dhigo Dhuusamareeb .
Maamul Goboleedka Koofurta Galkacyo ilaa Balcad waxaa Madaxweyne looga dhigayaa Dr.Mohamed Raabi oo Cabdiqaasim la ilmo adeer ah halka Xilka Madaxweyne Ku xigeenkana loo Wado Prof Mohamed Doodishe oo u dhashay beesha Mareexaan ahna Masuulka labaad ee ugu sareeyo Urur diimeedka Damu Jadiid.
3-Qorshaha sedexaad ee Dam Jadiid wuxuu yahay:- in Lixda Urur ee Puntland ka jira mid ka mida Dowladda la xirato ,la xoojiyo si xulufadda Faroole ee HORSEED loo wiiqo.
Xisbiga laga qaadan doono Puntland waxaa ka madaxa Ninka tirsan Kooxda Damjadiid oo kasoo Jeeda Gobolka Bari Gaar ahaan Degmada Qardho.
4-Qorshahaha Afaraad ee Damu Jadiid wuxuu yahay:- , In dhawaan hubkii yaalay Madaxtooyadda loo daabulay Dekeda ceel macaan iyo Agagaarkeda Halkaas oo lagu wareejiyay Saraakiil ka tirsan Alshabaab iyo Maleeshiyo beeleed kasoo jeedo Deegaamo dhowr ah, Hubkaas ayaa qeyb kamid ah waxaa loo qaaday Degaanka Bari iyo deeganada xeebta ah ee Nugaal si halkaas loogu sameeyo ciidamo ka tirsan alshabaab khalkhalna lagu dhameeyo waqtiga ka harsan Maamulka Faroole.
Hubka laga dhoofiyay Ceel Macaan oo daabuladiis socotay laba bil mudo ku dhaw wuxuu iskugu jiray Dhashiikayaal,Baasukayaal,Dabajeexyo (BKM')Hoobiyeyaal iyo AK47.waxaana hubkaas raray Sarkaal ka mida Saraakiisha gaarkaa ee Madaxweyne Hassan Garguurte qaabulsan amaankiisa laguna magacaabo Korneyl Cabdi Fataax oo u dhashay Hawiye,Mudulod ,Reer Mantaan.
5-Qorshaha shanaad ee Damu Jadiid wuxuu yahay :- In xerooyin Ciidan laga sameeyo Magaalooyinka Buula barde ,Dhuusamareeb Caabudwaaq iyo Jowhar halkaas oo laga sameynayo Sedex xero Ciidan oo lagu tababari doono Ciidamo gaarayo ilaa (20.000) Labaatan kun xero kasta .
Ciidanka wuxuu noqon doonaa Ciidamada saxda ah ee xooga dalka Soomaaliya Halka inta hada dowalda u shaqeysana la ruqseyn doono maadama ay kuwa hada jooga ku xiran yihiin Beelo ama Qabiilo.
6-Qorshaha lixaad ee Dam Jadiid wuxuu yahay:- In Dhalinyarada kasoo baxday Jaamacada Suudaan ee k atirsan DamJadiid lageeyo dhamaan Gobolada Soomaaliya si ay xafiisyo uga furtaan halkaasna ay kala shaqeeyaan sidii Urur diimeedka u qabsan lahaa dalka afarta sano ee soo socota marka waqtigooda dhamaado .
7-Qorshaha todobaad ee Damjadiid wuxuu yahay:- In wada hadal lala furo hogaamiyaha Xisbiga Wadani ahna Gudoomiyaha Golaha Wakiiladda Somaliland Cabdiraxmaan Cirro si uu gacan uga geysto hergelinta qorshaha Damjadiid iyo hindisaha isbalaarinta dalka Somalia.
Warbixintaan waa Warbixin Sirdoon,oo aan qeyb ka mida akhristayaasha u soo bandhignay anagoo ka tagnay qodobo xasaasiya.
Hadii sidaan sheekada u dhacdo Mustaqbalka dhaw ku xasuusta Warbaahinta Waagacusub,anagoo aheyn kuwii bil ka hor idiin si sheegay in Taliye Diini iyo Abaanduule Dhegabadan laga qaadi doono xilka.
. Halkaan ka Daawo Warbixino xaqiiqa noqday.